Billadda Badhisaab-Ku-Xigeenka G/Daadmadheedh! Sayid Maxamed Cumar Darwiishka
(Hadhwanaagnews) Friday, September 14, 2018 09:56:44
Labo sanno horteed ayaan cajaladda maskaxda dib u soo roogaa. Kadib waxa aan arkaa Gobolka Daadmadheedh sida uu ahaa. Hareeraha ayaan eegaa, dabadeed waxa aan halacsadaa deegaan dayacan, bulsho darxumeysan iyo duunyo dalanbaabi ah. Haddana waxa aan sawirtaa hummaagga xarunta Gobolka Daadmadheedh looga arrimin jiray, kadib waxa aan arkaa xafiisyo madhan, xaashiyo cadcad, iyo albaabbo xidhan. Labo sanno horteed ayaan hortayda ka halacsadaa, waxaana ii soo baxa sawir indhaha u daran. Runtii waa naxaa! Waa dhaliinyaro dansan, danyar daruufeysan, dumar darxumeysan iyo duqey wajigooda uu dihaal badani ka muuqdo. Waxaan
arkaa xildhibaan dheregsan oo madigiigixte ah, oo xoolihii maatida sidii hororkii u boobayaa. Waan ilmeeyaa. Waxa aan arkaa hummaagga masuuliyiintii Daadmadheedh oo daashadaashoonaya dacallada Hargeysa. Waxaan arkaa Magacii Daad-madheedh oo “Dad-madhan” loo beddalay! Labo sanno horteed sidaa ayuu ahaa Sawirka guud ee Gobolka Daadmadheedh iyo xaalladiisa dhabta ahi, laga se gudub.
1. Waxa uu ku guuleystay in uu dib u furo xafiiska Gobolka Daadmadheedh oo muddo labo sanno ah ahaa magac-u-yaal ay wajahaddiisa ku qoran tahay “Xarunta Gobolka Daadmadheedh.”
2. Waxa uu ku guuleystay in uu dib u agaasimo una dardargeliyo shaqadii iyo shaqaalihii dawladda ee muddada dheer kala xidhiidh go’sanaa
3. Waxa uu gacan weyn ka geystay sidii loo xakameyn lahaa khamrigii faraha baas ku hayay Gobolka Daadmadheedh, taas ay Ciidanka Bileyska iyo taliyahoodu na ay ku leeyihiin darajada koowaad
4. In uu dhalliinyarada dardargeliyay, kaalin weynna uu kaa qaatay sida loo xoogin lahaa dhismaha naadiyada ciyaaraha ee ka jira Degmada Oodweyne, isaga oo in bandanna ka caawiyay qarashka qabashada wareegyada iyo qarashka bixitaanka debedda ee Gobollada dalka ay ku tagaan
5. Wuxuu soo afjaray musuqii ay xildhaannada Oodweyne ku hayeen deeqaha danyarta loogu talogalay, isaga si toos ah u gaadhsiiyay deeqaha iyo danyartii loogu talogalay
6. In uu isku xidhay bulshada ku dhaqan Gobolka Daadmadheedh iyo dawladdooda oo muddooyinkii danbe ka dun furnaa
7. In uu qayb laxaad leh ka qaatay mashruuca u ballaadhnaa Somaliland ee waxbeerista, kaas oo illaa hadda la sugaayo goosashadiisa
8. In uu dib-u-heshiisiin ka dhex dhaliyay dadyow walaalo ah oo ku nool gobolka taas oo ay dhex martay shaqaaqo is-maan-dhaaf, taas oo uu si odaytinimo leh geedka hoostiisa ugu dhammeeyay
9. In uu sahamintii shidaalka ka hawlgalay misana wacyigalin badan uu siiyay dadkii wax-ma-garatada ahaa ee sida qaldan u fahmay hawlaha shiidaalka
10. In uu qaybta u badan ka qaatay dadkii barakacayaasha ahaa sidii loo deegaameyn lahaa loona siin lahaa gargaar degdeg ah
11. Waxa uu kaalin laxaad leh ka geystay habeyntii iyo hirgalintii Naadiga Akhriska, Qoraalka iyo Dhaqanka ee Abwaan Cali Sugulle Cigaal “Duncarbeed”
12. Iyo in uu xoojiyay xidhiidhka ka dhaxeeya degmooyinka Gobolka iyo deegaannada hoos yimaadda.